Ukunakekelwa Kwezinwele Zokwemvelo 2018 | Ukuvivinya nokuvikelwa kokuvikela
Indlela Yokwenza Izandiso Zakho Zigcine Ngomdwebo ofanele nokulondeka!
Geza imiyalo ngaphambi kokugqoka:
Kubaluleke kakhulu kuwe ukuthi ugeze izandiso zakho nge Isimo sezulu kuphela ngaphambi kokufaka. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi izinwele ziyancipha futhi zibopha mahhala.
Sincoma Aussie Moist noma Herbal Essence Sawubona Hydration (zingatholakala eWalmart nakwezinye izitolo zendawo zokunethezeka zendawo) noma noma yikuphi okumele kwenziwe khona ukuze kube nezinwele ezibukhali.
Thatha zonke izibopho ezivela esitokisini sakho, unweze ngokuphelele izinwele ngamanzi afudumele kuze zonke izinhlanga zigcwale. Nge-conditioner kuphela, gcwalisa izinwele bese unamazinyo amaningi ezinyosi, i-Denman shayela, i-wig shayela noma i-vent brush ikhamera ngesimo sezinwele bese uhlanza.
Okwe Kinky Curly textures Izandiso zisa izinwele phezu kwe-hanger futhi zivumela izinwele ukuba zome. LOKUZIPHUMA ISIHLOKO SOKUPHILA KWESIKHATHI SOKUPHAKATHI NOKUTHETHA AMAPHAKATHI A-CURLS! Ungadli uboya izinwele.
Okwe Afro Kinky texture ubeke izinwele zendwangu ngethawula bese uvumela umoya omile, lokhu kuzovimbela ukukhishwa okukhulu. Ungakwazi futhi ukufaka i-hanger uma ukhetha. Sicela usebenzise izinyo ezinamazinyo ezizayo uma uboya izinwele futhi u-Denman ibhulashi ukuze uchaze ama-curls. Ungaphuzi omile.
Okwe Kinky ngokuqondile imidwebo unomoya omile noma ophuza ome izinwele.
Okwe Ama-Wigs sicela ubone ividiyo yokufundisa ngezansi. Uzobona ukuthi wenza kanjani i-wig ibonakale njengesithombe.
Lapha ku-MyNaturalHairExtensions.com sikholelwa ekutholeni i-bang bang eningi le-buck yakho. Ukuthenga izinwele ezinhle kukuthatha nje manje! Ukunakekelwa kwezinwele ezifanele, amathiphu okubhala, nokugcinwa kuzoqinisekisa ukuthi ubude bezandiso zakho buhlala isikhathi eside kangakanani.
Misa Ukukhishwa Ngaphambi Kwenzeka!
I-Lets nje ibhekane namaqiniso, IZINDLELA ZONKE ZEMIBUZO ... kodwa kunezindlela zokunciphisa kakhulu ukuchitha. A
Qinisekisa okokuqala izinsimbi zakho. Lokhu kubaluleke kakhulu! Sinikeza uphawu lwe-weft ngemali encane ye $ 10.
Okwesibili, Ungasebenzisi ama-brushes e-bristle njengoba ejwayele ukugcoba izinwele zezinwele ezilodwa futhi aziphuce kusuka emgqeni. Njalo sebenzisa ama-combs amazinyo noma i-paddle brush.
Hlanza Futhi Isimo Sakho Izinwele Ngokufanele!
Ukuhlanza izinwele esizincomayo I-Shampoo Yokuhlanza Okungcolile ka-Giovanni. Okunye okunye okubizayo kuyinto I-Herbal Essence Sawubona Shampoo Yamanzi.
Ukumisela izinwele esincomayo I-Herbal Essence Sawubona Hydration (ukukhetha kwethu okungu- #1) noma yisiphi isimo esenziwe ngezinwele ze-wavy / curly. A
Qinisekisa ukuthi konke ukuzwa kakade kuphazamisekile futhi kudonsela esiqondisweni njengokungathi kunika i-2 side side ponytails. Tindela ikhanda kwelinye icala ngaphansi kweshado bese uvumela amanzi ukuthi agcwalise izinwele zakho ngokugcwele, esebenza ohlangothini olulodwa ngesikhathi. Yengeza umuthi wezintende zezandla zakho bese uphonsa phansi izinwele zakho kusuka kwesobunxele kuya kwiphuzu. Ungadonsa noma uhlanganise izinwele ukuze udale i-lather ngoba lokhu kuzokwenza ukuthi kube nokudinga okungadingekile! Qhubeka ukugoqa izandla zakho ngezinwele zakho mayelana nemizuzu ye-5. Hlanza ngokuvumela amanzi ukuba agijime ngezinwele zakho njengangaphambili, ungase udwebe izandla zakho ngezinwele zakho ukusheshisa inqubo yokuhlanza kodwa khumbula UNGAKHUMBI noma uhlanganise izinwele. Blot nge thawula futhi uvumele izinwele ku-AIR DRY
Sebenzisa indlela efanayo ye-conditioner yakho futhi uhlambulule
Shampoo: Kanye kanye namaviki angu-3
Co-Geza (i-conditioner wash): Ngokuvamile uma kudingeka
DALA INDAWO YOKUPHILA KUNYE NOKUHLELA KUYO
Kubalulekile ukuphatha izinwele zakho ngaphambi kokulala. Gcina izinwele zakho ebusuku ngesikhala sesiliki / satin noma isilikhi / satin bonnet. Amabhontshi anikezela i-leeway isikhathi eside kakhulu asebenza kahle. (bona isithombe esiphezulu)
Ngokwemidwebo ye-wavy / curly sincoma ukubeka i-5-10 enkulu noma i-braids ezinyaweni zakho bese uyibeka ngaphansi kwe-bonnet.
Ukuze uthole ama-Straight textures sincoma ukuthi uhlanganise izinwele zakho bese uzifaka ngaphansi kwesilika sikasilika / satin.
Ukulandela isimiso samalanga ebusuku kuzokwenza izandiso zakho zihlale isikhathi eside, zibheke kangcono, futhi zivimbele ukukhwabanisa okuholela ekusuleni okukhulu.
Phatha izandiso zakho njengokungathi zikhona izinwele zakho zangempela zemvelo!
LOKUPHAKATHI OKUBALULEKILE KANYE: Uma uthanda izandiso zakho bazokuthanda! Nawa amanye ama-Do & Donts A
vumela izinwele zakho zibe zomile uma unquma ukushaya omile njalo usebenzise umvikeli wokushisa
lapho ubeka izinwele zakho ngemikhiqizo yokushisa ngaso sonke isikhathi usebenzise izivikeli zokushisa ECHECIALLY nge-texture wavy. Ukushisa okukhulu okubangelwa ukushisa kungabangela umonakalo wokushisa futhi kuguqule (ukukhulula) iphethini le-curl yemvelo. I-Walmart inezinhlobo ezihlukahlukene zokushisa okushisa okumele ukhethe kuzo. Ukushisa kukaJohn Freida ukushisa okuluthayo okulondoloza umsizi wokuzivikela kuyinto enhle ongayisebenzisa ngoba isisindo saso sokukhanya namafutha asikhululekile. A
Landela isimiso sethu sasebusuku noma udale eyakho.
Landela isimiso sethu sokugeza ngokuqondile.
Sebenzisa ama-paddle bush kanye nama-como amazinyo
Isimo Esijulile izinwele zakho ngokuvamile
Uma usebenzisa noma yiziphi izinsizakalo zombala, udayi, ama-bleach kits, noma imibala engunaphakade kufanele uqiniseke ukuthi ufuna umculi ochwephesha noma ochwepheshe bombala. Asiqinisekisi ikhwalithi ngemuva kokushintsha kwamakhemikhali ngakho sicela uqiniseke ukuthi uvikela ukutshala kwakho.
Ungadlulisi umkhiqizo wemikhiqizo emithonjeni yakho! Izinwele zivame ukuvuthwa futhi zibambe lapho imikhiqizo yokumisa ingeziwe. Uma unezandiso ze-curly futhi ufuna ukunciphisa izinwele noma ukunciphisa i-frizz nje sebenzisa inani elincane le-anti-frizz serum. Uma imikhiqizo ingeziwe ungawasusa ngokuhlanganisa ama-Herbal Essence Isimo se-Hydration conditioner ngaphandle kokubangela ukoma.
Ungalokothi uzame isitayela, ugeze, noma uhlanganise izinwele zakho uma ukhathele noma ugijima! Lena iresiphi yokukhungatheka futhi kuzokwenza ube nzima kakhulu ngezinwele zakho. A
ungasebenzisi amabhulashi e-bristle.
Ungazami ukushintshashintsha kwamakhemikhali izinwele ngaphandle isiqondiso somsebenzi
Ukunakekelwa kwezinwele ngento ngayinye
ASIKHUMBI UKUFANELEKA KWE-DENMAN BRUSH NETHEMBA! Esikhundleni salokho indlela engcono kakhulu yokuzibheka ikhona nesimo sezimanzi futhi izinyo eziningi ziza. I-tangle tease izosebenza futhi. Ukusebenzisa i-brush yaseDenman kungaba nzima kakhulu, isikhathi esiningi futhi singabhoboza izinwele kusuka kwi-weft. Ungazami ukulwa nalezi zinwele uma zomile. Qinisekisa ukuthi i-hydrated kakhulu ngamanzi nesimo se-conditioner.
Lezi zinwele zigqoka kakhulu ngokuphuma kwekhanda nokuphuma ngaphandle. Noma yini imikhiqizo ye-styling oyithandayo ngezinwele zakho zemvelo ingasetshenziswa nalokhu. Lezinwele zithanda umongameli njengenwele yakho ye-4b 4c. Ukuphuma kwekhanda nokukhishwa kwekhanda kudlule isikhathi esithile nalezi zinwele futhi kusiza ama-curls ukuze asule!
Bheka Lo Mkhiqizo Uhlelwe kuleli khasi.
Sincoma ukusebenzisa i-Denman shayela noma ububanzi bethatha inhlanganisela nalezi zinwele. Lezinwele ezifana ne-afro kinky ithanda umswakama. Ukushiya ukukhanya okuncane ku-conditioner namanzi kusebenza kahle.
Uma ukuxosha usebenzisa i-Denman shayela futhi yenza ama-curls aphume.
Kinky Straight, Perm Yaki, i-yaki eyinqaba, I-Bone iqondile:
Lezi zinwele zidinga ukugcinwa okuncane kakhulu futhi akuthandi imikhiqizo eminingi. Ngeke iphathe kahle nomakhi womkhiqizo.
Uma kunokwenzeka zama ukumboza izinwele zakho ebusuku ukuze unciphise ukukhwabanisa nokudala ukulala okuhle ngosuku olulandelayo.
Siyabonga Ukuvakashela Izandiso Zezinwele Zami Zemvelo!
Afro Kinky Day Day